Ndebiri: Gịnị ka DEAD na DITO na-anọchi anya ya? | Martech Zone
Anọ m na-emepe emepe, na-akọwapụta, na-etinye ọnụ ma na-atụle atụmatụ maka ihe karịrị afọ iri. Ebe mụ na ọtụtụ narị ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ yana ọtụtụ mmepe na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mpụga, ọ na-eju m anya mgbe niile na otu ụlọ ọrụ na-ezighi ezi na-esetịpụ atụmatụ nke mmecha na oge imecha. N'ihi nke a, abịara m nweta atụmatụ ọhụrụ DEAD na DITO maka atụmatụ na mmecha ọrụ. Lee ha:
Ọ BR Development: Atụmatụ Atụmatụ na Deadbọchị Ikpeazụ:
Njikwa Ahịa: Ihe ndị ahịa na-atụ anya ga-ewere 25% ogologo oge karịa karịa ọrụ ahụ Onye ahịa ahụ kwere nkwa ya.
Ọrụ chọrọ: Ihe arụ ọrụ ị chọrọ ịkọwapụta agaghị arụ ọrụ. Tinye 25% oge nhazi oge iji hụ na ihe ndị chọrọ chọrọ nwere ike mejuputa ya dabere na usoro ihe owuwu gị na ngwa ngwa gị.
Ọrụ chọrọ: Ihe oru a choro ka ị kọwapụtara agaghị eme ka ị tụrụ anya ya. Ọ bụ ihe jikọrọ ya na mgbochi asụsụ nke Klingon na Bekee (ma ọ bụ nke ọzọ) n'etiti Onye Mmepụta na Onye njikwa Ahịa. Tinye 25% oge mmepe maka oru ngo gi, weputara ya iji hu na emeputara dika ihe ichoro.
Njikwa ọrụ: The n'ezie mmepe ga-ewe 25% ogologo ịzụlite karịa atụmatụ atụmatụ ahụ.
Jiri Ọnọdụ: Usoro azụmaahịa ị kọwara naanị nwere 25% nke ihe eji eme ihe n'ezie. Add 50% more development time to your project, post tọhapụ, ịgbanwe maka n'ezie ojiji vs. tụrụ anya ojiji. Nke a gụnyere arụmọrụ yana arụmọrụ.
Meela Ngwa Ngwa:
Emeputara oru ngo a ma re ya ahia ubochi iri.
N'ezie ọ ga-ewe 12.5 ụbọchị iji wuchaa dị ka ekwere.
Ọ ga-ewe 15.625 ụbọchị iji dokwuo anya ihe ndị na-ezighi ezi ma ọ bụ ihe achọrọ.
Ọ ga-ewe 19.53125 ụbọchị iji mezue ọrụ ahụ dịka akọwapụtara nke ọma.
Ya mere… oru ngo-agwụ agwụ na ~ 20 ụbọchị.
Ozugbo emechara ya, ọ ga-achọ ụbọchị 10 iji dozie nsogbu ndị pụtara ìhè.
Total Project oge bụ 30 ụbọchị.
DITO: Ezigbo ụra na-emepụta ma wepụ ya.
Otú ọ dị, ọ dabara nke ọma, ụlọ ọrụ anyị nwere ihe nkwụnye ụgwọ DITO iji tinye, chekwaa ọrụ ahụ, ma kwuo ọrụ ọzọ.
The ịrịba mmepe na ị goro n'ezie insomniacs na ike mgbe gbatịa 8 azụmahịa awa n'ime ọtụtụ ndị ọzọ, gụnyere ná ngwụsị izu. A 100% uru na arụpụtaghị ego: ~ daysbọchị 10. Ugbu a anyị anọla naanị abalị iri.
Site na cajoling programmers na Take-Out nri, ị nwere ike ịnweta izu ụka ma rụọ ọrụ site na nri. (Mmepe bụ amamiihe ụmụ okorobịa ma m mgbe niile na-eche ihe mere a $ 75 / hr programmer ga-arụ ọrụ site na otu awa nke nri ehihie maka a $ 10 Pizza… onye maara?!). Ego: ~ 25%. Ugbu a anyị anọla naanị ụbọchị ise.
Dika oge igbu oge na ndi ahia gha enweta iwe, ikwesiri igbakwunye Mountain Dew na Weputa ma nke a gha aputa mgbe ufodu oge 24 ruo 36 nke usoro ihe omuma. A ga-ewepụta ihe ngwọta ga-eweta, yana ahụhụ (mgbe ụfọdụ n'ihi pizza crust crumbs na keyboard) n'oge.
DITOetinyere post-tọhapụ nsonaazụ na nchekwa ụbọchị 5 na mmelite post-ntọhapụ.
Na ijikọta NWỤRỤ ANWỤ na DITO Mgbakọ na-arụpụta mfe 1.5 otutu na ngwụcha ọrụ. Na-etinye oge 50% oge karịa maka mmecha na ọrụ karịa ka ị tụrụ anya.
IHE: Okwu acronym NWỤRỤ ANWỤ na-adị irè n'ihi na Ndị Mmepe ga-anwụ na nkezi nke 25% ngwa ngwa karịa ụdị ọrụ n'ihi nsogbu ndị na-akpata enweghị ụra, ọbara mgbali elu, ọrịa shuga na nsogbu dị arọ site n'aka Pizza, Donuts, Mountain Dew na Coffee. DITO metụtara n'ihi na ndị ahịa gị ga-etinye atụmatụ mbụ na ọrụ ọzọ a ga-ere.
Tags: acronymNWỤRỤ ANWỤEnweghi ike nke onye Mmepụta ma wepuAtụmatụ mmepe na oge mmechiDITO
Mee 12, 2007 na 2: 51 PM
$ 10 Pizza! Anyị na-arụ ọrụ site na nri ehihie maka 'Cheap Chinese': $ 4.99!
Mee 12, 2007 na 4: 24 PM
Echefula ọwara carpal, na scoliosis!
Mee 14, 2007 na 8: 16 AM
Ndụ mwute (ma ọ bụ ka m kwuo… "enweghị ndụ") nke onye mmemme. Kwesịrị ịgbakwunye ịgba alụkwaghịm na alụghị di ma ọ bụ nwunye. Ma ị kụrụ ntu na isi. Karịsịa inye ahịa ahụ mgboagha nke ịtụgharị ngwaahịa na obere oge. Ma ọ bụ ọbụna njọ… na-ere ya tupu a tụrụ ime ya !!! Anyị hụrụ ya n'anya. Oge ọzọ a ga-arụ ọrụ, jide n'aka na ndị na-ere ahịa ahịa dị n'aka… oge niile nke ọrụ ahụ. Ọ dị onye mkpa inweta kọfị ahụ.